“R/W Kheyre waxa uu iska indha-tiray dadkii Axmed Madoobe adoonsiga ugu jiray” – Daahir Jeesow – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 13th March 2019 0115
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah xildhibaanada Baarlaaanka Soomaaliya ayaa si adag u weeraray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe.
Xildhibaan Jeesow ayaa ugu horeyn sheegay in shacabka Kismaayo ay ku jiraan wuxuu ugu yeeray Adoonsi, maadaama dadka lahaa talada deegaanada Jubbaland ay dhibaato kala kulmaan maamulka, sida u hadalka u dhigay.
Ra’iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre ayuu sheegay inuu la kulmay dad gaar ah oo loo soo xulay, maadaama sida uu sheegay addoonsi la geliyay dadkii lahaa talada maamulka Jubbaland.
Xildhibaanka wuxuu sidoo kale sheegay in shacabkaasi ay doonayaan inay arkaan ra’iisul wasaarahooda balse laga hor taagan yahay, isaga oo ugu baaqay Kheyre inuu sameeyo talaabo kasta oo dadkaasi uu kula kulmi karo.
“Dadka Reer Kismaayo adoonsi ayay ku jiraan, dadkii loo baahnaa Ra’iisul Wasaaraha lama kulmin dad gaar ah ayaa loo soo xulay, marka ra’iisul wasaaraha dhibka meesha ka jira wa uu ogyahay, waxaana laga rabaa in isaga oo ka taxadaraya ammaankooda uu dadkaasi qaabilo lana kulmo” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow.
Siyaaiyiin farabadan oo kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ayaa aad u dhaliilsan Siyaasada Madaxweynaha Maamulka Jubbaland uu ku maamulo maamulkaasi, kuwaasi oo aaminsan in aragtidiisa kaliya cida ku Shaqeyneysa uu doonayo.
DEG DEG Beesha Sade oo shir hordhac u ah Shirki Nabadeynta Jubbaland u Kismaayo uga furmay ..
admin 20th February 2016 20th February 2016
Dhagayso:- Shacabka Buuhoodle oo ka horyimid Ol olayaal doorasho oo uu leeyahay maamulka Soomaaliland
Tifaftiraha K24 2nd January 2016
Top News: Madaxweyne Xassan oo hadalkan ka yiri weerarkii shalay Kismaayo ka dhacay.
admin 23rd August 2015 27th August 2015